နိုင်ငံ တကာ က လက်ရှိ တရုတ် သူလျှို ဆိုသူ တွေ ရဲ့ အရှုပ် တော် ပုံများ… – Shwe Ba
နိုင်ငံ တကာ က လက်ရှိ တရုတ် သူလျှို ဆိုသူ တွေ ရဲ့ အရှုပ် တော် ပုံများ…
Shwe MM | July 26, 2020 | International News | No Comments
ပြင်သစ်- တရုတ် – စင်ကာပူ – အမေရိကန်
တရုတ် စစ်တပ်က သူလျှိုလို့စွပ်စွဲ ခံရတဲ့ သုသေသနပညာရှင် Tang Juan ကို ကြာသပတေးနေ့ က ဖမ်းဆီးမိခဲ့ တယ် လို့ အမေရိကန် အာဏာပိုင်တွေက ပြော ပါတယ်။
Tang Juan ဟာ San Francisco မြို့က တရုတ်ကောင် စစ်ဝန်ရုံးမှာ ပုန်းအောင်းနေတယ် လို့ အစကပြောကြားထားတာပါ။ သူမဟာ သူ့ဘာသာ သူလာအဖမ်းခံတာလား? သူမကိုဖမ်းမိတာလား သေချာမပြောပါ။ San Francisco က တရုတ်ကောင်စစ် ဝန်ရုံး ကို ပိတ်ခိုင်းရင် သူမထွက်လာနိုင်တာ မို့ ကောင်စစ်ဝန်ရုံး က ထုတ်ပေး လိုက်တာလားလည်း မသဲကွဲ ပါဘူး။
သူမကို diplomatic immunity (သံတမန်ရေးလွတ်ငြိမ်းချမ်း သာခွင့်) မပေးနိုင် ဘူးလို့ပြောထား ပါတယ်။ ဒီနေ့ Sacramento မြို့မှာ သူမကိုရုံး ထုတ်မယ်လို့ဆိုပါတယ်။
သူမ ဟာ ကယ်လီ ဖိုးနီးယား တက္ကသိုလ် မှာ တရုတ် ပညာရေးဝန်ကြီးဌာန လက်အောက် ရှိ ဆေးရုံကနေ သုသေသန ပရိုဂရမ် နဲ့ လာခဲ့တာ ဖြစ်ပါတယ်။ သူမကို အမေရိကန် FBI အေးဂျင့် တွေက စုံစမ်းမေးမြန်းစဉ်တုန်းက သူမဟာ တရုတ်စစ်တပ် နဲ့ ပက်သက်မှုကို ငြင်းဆို ခဲ့ပါတယ်။ သူမရဲ့ စစ်ဝတ်စုံ အဆောင်အယောင်အပြည့်စုံ နဲ့ ဓာတ်ပုံတွေကို ထုတ်ပြစဉ်မှာလည်း သူမဘာမှမသိကြောင်းငြင်း ဆိုခဲ့ပါတယ်။ အမေရိကန်တရားရေးဌာန ရှိ စာရွက်စာတမ်းတွေ အရ သူမဟာ တရုတ်လေတပ် ကဖြစ်ပြီး ဆေးသုသေသနပညာရှင် လို့ ဆိုပါတယ်။
အခု နောက်သူ လျှိုမှု တစ်ခုကို ဆက် ပါမယ်။ စင်ကာပူနိုင်ငံသား Dickson Yeo Jun Wei ဟာ အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုမှာ မနေ့က သူလျှိုမှုအတွက် အပြစ် ရှိကြောင်း ဝန်ခံခဲ့ပါတယ်။ Dickson Yeo Jun Wei ဟာ စင်ကာပူတက္ကသိုလ် (NUS) မှာ နိုင်ငံရေးသိပ္ပံကို လေ့လာခဲ့သူပါ။ သူဟာ တရုတ်ပြည် ရဲ့ ခေတ်သစ်ပိုးလမ်းမကြီး (Belt and Road) နဲ့ ကမ္ဘာ့စီးပွားရေးကွန်ယက်အကြောင်း ကို စာတမ်းပြုစုခဲ့သူပါ။
Dickson တစ်ယောက် PhD ကျောင်းသား ဘဝတုန်းက ပေကျင်းမြို့တော်မှာ အရှေ့တောင် အာရှနိုင်ငံတွေရဲ့ နိုင်ငံရေးအခြေအနေ အကြောင်း presentation သွားလုပ်ချိန်မှာ တရုတ်သူလျှိုလုပ်ပေးဖို့စည်းရုံးတာခံခဲ့ရတယ်လို့ ဆိုပါတယ်။ သူဟာ အဲ့ဒီတုန်းက National University of Singapore မှာ Public Policy နဲ့ PhD ယူဖို့ တက်နေတာဖြစ်ပါတယ်။ သူ့ကို သူလျှိုအဖြစ် စည်းရုံးသိမ်းသွင်းခဲ့သူတွေဟာ Chinese Think Tank ဉာဏ်ကြီးရှင်အဖွဲ့ဝင်တွေဖြစ် တယ်လို့ ဆို ပါတယ်။
Dickson ဟာ အမေရိကန်နိုင်ငံ မှာ တရုတ်ပြည် နဲ့ အာဆီယံနိုင်ငံ တွေအရေးကျွမ်းကျင်သူ အတိုင်ပင်ခံ အလုပ် ကို လုပ်ခဲ့ပါတယ်။ အဲ့ဒီ နိုင်ငံရေးအတိုင်ပင်ခံ စီးပွားရေးလုပ်ငန်း မျက်နှာဖုံးအောက် မှာ သူဟာသူလျှိုအဖြစ် လုပ်ကိုင်ပြီး အမေရိကန်ကလျိူ့ဝှက်သတင်းတွေ ကို စုဆောင်းခဲ့ပါတယ်။ သူရဲ့ဝန်ခံချက်အရ သူဟာ ၂၀၁၅ ကနေ ၂၀၁၉ ခုနှစ်အဖမ်းခံရချိန် အထိ တရုတ်သူလျှိုအဖြစ် လုံခြုံရေးမြင့်မားတဲ့ အမေရိကန်တွေရဲ့ လျိူ့ဝှက်သတင်းတွေကို လိုက်စုပေး ခဲ့ပါတယ်။ သူ့ရဲ့ အတိုင်ပင်ခံလုပ်ငန်း အတွက် ဝန်ထမ်းကြေညာခေါ်ခဲ့ရာမှာ resumes ကိုယ်ရေး အစောင် ၄၀၀ လောက်ရခဲ့ပါတယ်။ အဲ့ဒီထဲက ၉၀ ရာနှုန်းဟာ အမေရိကန်စစ်တပ် (သို့) အစိုးရနဲ့ပတ်သက်သူတွေပါ။
အဲ့ဒီလူတွေ ရဲ့ စာရွက်စာတမ်းတွေ ကို တရုတ် အစိုးရဆီ လွှဲပြောင်းပေး ခဲ့ပါတယ်တဲ့။ ငွေကြေးမချောင်လည်တဲ့ သူတွေကို သူ့အတွက် အလုပ်လုပ်ပေးအောင် စည်းရုံးရေးဆင်းခဲ့ပြီး သတင်းနှိုက်တာလည်း လုပ်ခဲ့ပါတယ်။ အဲ့ဒီအထဲမှာ အမေရိကန်လေတပ်နဲ့ ဆက်နွယ်ပြီး အလုပ်လုပ်နေတဲ့ အရပ်သား တစ်ယောက်လည်းပါပါတယ်။ သူ့ဆီကနေ အမေရိကန်လေတပ် F-35B stealth fighter-bomber လေယာဉ် ပရောဂျက်သတင်းတွေ နှိုက်ခဲ့ပါတယ်။
ပြီးတော့ အာဖကန်နစ္စတန် မှာ တာဝန်ထမ်းခဲ့တဲ့ အမေရိကန် ပန်တာဂွန်စစ် ဌာနချုပ် က ဝန်ထမ်း တစ်ယောက်လည်း ပါပါတယ်။ ပြီးတော့ အမေရိကန် ပြည်ထောင်စု ပြည်ထဲရေးဝန်ကြီးဌာနက ဝန်ထမ်းတစ်ယောက်လည်း ပါ ပါသေးတယ်။ သူ့ကို အမေရိကန်အစိုး ရ ကက်ဘိနက် က အရေးကြီး ပုဂ္ဂိုလ် တစ်ယောက်အကြောင်း ရီပို့ရေးခိုင်းခဲ့တာပါ ။
သူတို့ကို Dickson က သူလိုချင်တဲ့ ရီပို့တစ်စောင် ရေးပေး ဖို့အတွက် တစ်ယောက် ကို ဒေါ်လာ ၂၀၀၀ လောက်ပေးခဲ့ ပါတယ်တဲ့။ Dickson က အလုပ်လျှောက်တဲ့ social media page တွေ websites တွေကနေ အတိုင်ပင်ခံကုမ္ပဏီဗန်းပြပြီး တရုတ်အစိုးရအတွက် အလုပ်လုပ်ပေးမယ့် လူတွေကိုလည်း ဆွဲဆောင်စုဆောင်းခဲ့ပါတယ်တဲ့။ တရုတ်အစိုးရအတွက် သတင်းစုဆောင်းရာမှာ တရုတ်ထောက်လှမ်းရေးက အရေးကြီးတဲ့ လူမသိတဲ့ သတင်းမျိုးကိုသာ စုဆောင်းခိုင်းတာပါ။
သူတို့ scuttlebutt လို့ခေါ်တဲ့ ကောလ ဟာလလို သတင်းမျိုး ကိုလုံးဝမလိုချင်ဘူးလို့ ပြောထားပါသတဲ့။ အစပိုင်းမှာ သူ့ကို အရှေ့တောင်အာရှနိုင်ငံတွေရဲ့လျှို့ဝှက်သတင်းတွေသာ စုဆောင်းခိုင်းပြီး နောက်မှ အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုဖက် ဦးလှည့်ခိုင်းခဲ့တာပါ။ သူဟာ တရုတ်ပြည်ကို အကြိမ် ၂၀ လောက်သွားခဲ့ပြီး ထောက်လှမ်းရေးအချိတ်အဆက်တွေနဲ့ နေရာပေါင်းစုံပြောင်းပြီး ၂၅ ကြိမ်လောက်တွေ့ခဲ့ရပါတယ်။
သူတရုတ်ပြည်ကိုဝင်ရင် လူဝင်မှု ကြီးကြပ်ရေးမှာ တန်းစီစရာမလိုပဲ သပ်သပ်ခွဲဝင်လို့ ရပါသတဲ့။ အမေရိကန်မှာရှိနေစဉ် တရုတ်ထောက်လှမ်းရေးကို မဆက်သွယ်ရပါဘူး။ သူသုံးဖို့ ဘဏ်ကဒ်ပေးထားပါတယ်။ အရေးကြီးရင် Coffeeshop လိုနေရာကပဲ email ပို့ခိုင်းပါတယ်။ အမေရိကန်မှာ မရှိနေရင် WeChat နဲ့ တရုတ်ထောက် လှမ်းရေးဘက်ကို ဆက်သွယ် ရပါတယ်တဲ့။
သူ့ကိုမတူတဲ့ ဖုန်းနံပါတ်အမျိုးမျိုးကို သုံးပြီးဆက်သွယ်ခိုင်းပါသတဲ့။ တရုတ်ထောက်လှမ်းရေးက သူ့ကို ဘာတွေ ပစ်မှတ်ထား သတင်းစုဆောင်းရမယ်ဆိုတာ ညွှန်ကြားပါသတဲ့။ အမေရိကန် ကုန်သွယ်ရေးဌာန ၊ artificial intelligence အသိဉာဏ်တုကိစ္စ၊ ကုန်သွယ်ရေးစစ်ပွဲကိစ္စ စသည်ဖြင့် ညွှန်ကြားပါသတဲ့။
တရုတ်ထောက်လှမ်းရေးကနေ သူ့ကို ညွှန်ကြားရာမှာ သူတို့ပစ်မှတ်ထားသူဟာ –
အလုပ်ခွင်မှာ မကျေနပ်ချက်တွေရှိနေသလား…? ငွေရေးကြေး​ရေးအကျပ်အတည်းရှိနေသလား…? သူတို့မှာကလေးတွေထောက်ပံ့ဖို့ရှိနေသလား…? သူတို့မှာ အလုပ်ကအနားယူ retired လုပ်ရင်ကြုံရမယ့်အခက်အခဲကို ပူပင်နေသလား…? စတဲ့အားနည်းချက်တွေ နဲ့ ပစ်မှတ်ထားရှာ ပါသတဲ့ ။
၂၀၁၉ ခုနှစ် နိုဝင်ဘာလမှာ Dickson တစ်ယောက် လေဆိပ်မှာ အမေရိကန်မြေပေါ်ခြေချလိုက်တာနဲ့ အဖမ်းခံလိုက်ရတာ ဖြစ်ပါတယ်။ သူ့ကို အောက်တိုဘာလ ၉ ရက်နေ့မှာ အမိန့်ချမှာ ဖြစ်ပါတယ်။ နောက် ပြင်သစ်ကိစ္စဆက်ပါမယ်။ ဒီနှစ် ဇွန်လိုင်လဆန်းတုန်းကလည်း ပြင်သစ်နိုင်ငံမှာ လူသုံးယောက်ကို တရုတ်ထောက်လှမ်းရေးအတွက် သူလျှိုလုပ်ပေးမှုနဲ့ တရားစွဲဆိုခဲ့ပါတယ်။ အဲ့ဒီ Pierre – Marie H. နဲ့ Henri M. တို့ဟာ တကယ်တော့ #ပြင်သစ်ထောက်လှမ်းရေး DGSE မှာ အလုပ်လုပ်ခဲ့ကြသူတွေပါ။ သူတို့ဟာ ထောင်ဒဏ် ၁၅ နှစ်အထိ ကျခံရနိုင်ပါတယ်။တကယ်တရုတ်ကိုသူလျှိုလုပ်ပေးခဲ့ရင် သူတို့ဟာ နှစ်ဖက်ချွန် double agents တွေဖြစ်လာမှာပါ။
Pierre – Marie H. ရဲ့ မိန်းမဖြစ်သူ Laurence H. ကိုလည်း နိုင်ငံတော် သစ္စာဖောက်မှုနဲ့ တရားစွဲထားပါတယ်။ သူတို့ကိစ္စကို အလွန်အရေးကြီးကိစ္စအဖြစ်လ၂၀၀၈ ခုနှစ်က ပြင်သစ်အာဏာပိုင်တွေက စုံစမ်းဖော်ထုတ်ခဲ့တာပါ။ Henri M. ဟာ ပြင်သစ်ထောက်လှမ်းရေးမှာလုပ်နေစဉ် ၁၉၉၇ ခုနှစ်မှာ တရုတ်ပြည်ပြင်သစ်သံရုံးမှာ ဒုတိယအတွင်းဝန်အနေနဲ့ နေခဲ့ပါတယ်။ သူဟာ သံအမတ်ကြီး ရဲ့ တရုတ်စကားပြန်မလေးနဲ့ဇာတ်လမ်းရှုပ်တာကြောင့် ၁၉၉၈ ခုနှစ်အစောပိုင်းမှာပဲ ပြန်ခေါ်ခံခဲ့ရတာပါ။ je t’aime ကို ဘာသာပြန်ခိုင်းတယ်ထင်ပါရဲ့။
သူဟာ အလုပ်က အနားယူပြီး ၂၀၀၃ ခုနှစ်မှာ တရုတ်ပြည်ကို ပြန်သွားခဲ့ပါတယ်။ အဲ့ဒီ တရုတ်စကားပြန်မလေးနဲ့ယူပြီး ဟိုင်နန်ကျွန်းမှာ အခြေချပါတယ်။ ပြင်သစ်ဂျာနယ်လစ် Franck Renaud က Henri M. ရဲ့ အရှုပ်တော်ပုံဇာတ်လမ်းကို Les Diplomates အဖြစ်စာအုပ်ထုတ်ခဲ့ပါတယ်။ အဲ့ဒီ ၁၉၉၀ ကျော်ကာလ Henri M. ပေကျင်းမြို့တော်ရောက်နေချိန်မှာ ပြင်သစ် နဲ့ တရုတ်ရဲ့ ဆက်ဆံရေးဆိုးဝါးနေချိန် ဖြစ်ပါတယ်။ တရုတ် ၁၉၈၉ Tiananmen ရင်ပြင်အရေးအခင်း၊ ၁၉၉၁ ပြင်သစ်စစ်သင်္ဘော ဖရီးဂိတ်တွေ ထိုင်ဝမ်ကိုရောင်းမှု စတာတို့နဲ့ တင်းမာနေချိန် ဖြစ်ပါတယ်။ သူ့ကိုဘယ်လိုဖမ်းမိလည်း မပြောထားပါဘူး။
Pierre – Marie H. ကိစ္စ ကတော့ သူဟာ ပြည်ပမှာ ထောက်လှမ်းရေး တာဝန်မထမ်းဆောင်ဖူးပါ။ သူ့ကို ဆွစ်စလန်နိုင်ငံ ဇူးရစ်လေဆိပ်မှာ ငွေတွေသယ်ဆောင် လာမှုနဲ့ ဖမ်းဆီးခဲ့တာပါ။ သူဟာ တရုတ်ထောက်လှမ်းရေး အဆက်အသွယ်နဲ့ အိန္ဒိယသမုဒ္ဒရာထဲက ကျွန်းတစ်ကျွန်းမှာ တွေ့ဆုံပြီး ပြန်လာတယ်လို့ ဆိုပါတယ်။ အခုလထဲမှာ ကြားသိခဲ့ရသမျှ တရုတ်သူလျှိုဆိုသူတွေရဲ့အရှုပ်တော်ပုံ အစုံစုံကို အတိုချုံးတင်ပြလိုက်ပါတယ်။
အိန္ဒိယက အရေးကြီး သတင်းအချက်များကို လွှဲပေးခိုးယူနေသော တရုတ် ဂျာနယ်လစ် (၁)ဦးကို အိန္ဒိယ ရဲတပ်ဖွဲက ဖမ်းဆီးလိုက်
(COVID-19) ကိုရိုနာ ဗိုင်းရပ်စ်ကြောင့် အမေရိကန် တောင်ကိုရီးယားနိုင်ငံတို့ ပူးတွဲစစ်ရေးလေ့ကျင့်မှု အစီအစဉ်ကို ရွှေ့ဆိုင်း